बालकको मुखमा ५२६ को दात कसरी आयो ? (भिडियो सहित) - Nepali Online News Media-shikharnews.com
बालकको मुखमा ५२६ को दात कसरी आयो ? (भिडियो सहित)
२०७६ साउन १७ शुक्रवार
एउटा व्यक्तिको दाँतमा ३२ दन्त हुन्छ भन्ने सुनिएकै हो । तर, पाँच सय २६ वटा दाँत हुनु आश्चर्यको विषय हो । भारतमा एउटा बालकको मुखमा पाँच सयवटा दाँत भेटिएको छ । मुख दुखेर अस्पताल भर्ना भएका बालकको मुखबाट उक्त संख्याको दाँत फेला परेको हो ।
चेन्नाईको सविथा डेन्टल कलेजमा भर्ना भएका बालकका अभिभावक कतै मुखको क्यान्सर त होइन भनी बालकलाई अस्पताल ल्याएका थिए बङ्गरामा २०० ग्रामको ठूलो संरचना देखेर छक्क परे । १६ साउनमा शल्यक्रिया गरेर झिक्दा पाँच सय संख्याको दाँत भेटिएको थियो ।
५२६ टुक्रा साना दाँतहरु एक मिलिमिटर देखि १५ मिलिमिटर ठूला थिए । ती दाँतहरु झिकिएपछि उनीसँग अब २१ वटा दाँत रहेको छ । बालक तीन वर्षको उमेरमा अस्पताल लगिंदा जाँच गराउन नमानेपछि अभिभावकले फर्काएका थिए ।
यसअघि मुम्बईमा एक किशोरको मुखबाट २३२ दाँत निकालिएको थियो । अहिलेको संख्या किर्तिमान बनेको छ । भारतको विजयकुमारसँग ३७ वटा दाँत छ जुन गिनिज बुकको विश्व किर्तिमानमा दर्ता छ । एजेन्सी
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिबले रोजगार पाएको श्रममन्त्रीको दावी
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले गरिबले रोजगारी पाएको दाबी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गरिबको चुलो बाल्न सहयोग गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। बिहीबार श्रम मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बिष्टले काम सन्तोषजनक नभए पनि गरिबले रोजगारी पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो वर्ष १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जनालाई औसत १३ दिन रोजगारी दिइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा ५ सय ९९ स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका ६ हजार ८ सय ६४ वटा सामुदायिक आयोजनामा अल्पकालीन रोजगारी दिइएको जनायो ।
मन्त्री बिष्टले यो कार्यक्रमको माध्यमबाट काम नगरी रातारात धनी बन्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने दाबी गरे। बिष्टले भने,‘खान नपाउने जनताले खान पाए, यसमा मलाई गौरव छ । उनीहरूका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले महत्वपूर्ण अवसर दियो, बेरोजगारीलाई भयावहका रुपमा चित्रण गर्ने होइन। रोजगारीका सम्भावनाको कुरा गर्ने हो, हामी त्यही गरिरहेका छौं।’